9 ka tirsan askarta Maamulka Puntland oo ku Geeriyooday Qarax lagula eegtay Gal-gala |
9 ka tirsan askarta Maamulka Puntland oo ku Geeriyooday Qarax lagula eegtay Gal-gala
Inta la xaqiijiyay sagaal askari oo ka tirsan ciidamada Puntland ayaa ku geeriyooday weerar miino oo ka dhacay deegaanka Gal-gala oo ay isku hor-fadhiyaan ciidamada Puntland iyo kuwa daacad u ah ururka Al-shabaab.
Taliyaha aag-ga Gal-gala Gashaanle Cabdiraxmaan Faarax Gurxan oo waraysi kooban siiyay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa mid xoogan , isla markaana ciidamada Puntland ay iska caabin ku sameeyeen kooxihii weerarka soo qaaday.
Waxa uu sheegay in is-rasaasyn muddo socotay ay dhex-martay ciidamada Puntland iyo maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday ,isaga oo sheegay in tiro ka tirsan kooxihii weerarka soo qaaday goobta lagu dilay.
Taliyaha ayaa ka gaabsaday in uu faah-faahin dheer aad ah ka bixiyo weerarkan oo la aaminsan-yahay in uu yahay kii ugu dhimashada badnaa mudooyinkan oo lala eegto ciidamo ka tirsan Puntland gaar ahaan kuwooda ku sugan buuralayda Gal-gala.
Tiro dhaawacyo ah oo ka tirsan ciidamada Puntland ayaa la soo gaarsiiyay maanta duhurkii cisbitaalka Bosaaso ,waxaana sida la sheegay tirada dhaawaca ah ay kor u dhaafyasaa ilaa afar askari ,kuwaasi oo kamid ahaa askarta la weeraray.
Ugu danbayn, ciidamo ka tirsan Puntland ayaa la sheegay in ay ka baxeen degmada si ay u ugu biiraan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-shabaab ee Buuraha Gal-gala , xilli Kolonyada la weeraray ay ku jireen saraakiil xilal muhiim ah ka hayay ciidamada gobolka.